Zodiac: Orcanon Odyssey RPG misotro amin'ny Final Fantasy | Vaovao IPhone
Hafiriana no niandrasan'ireo mpampiasa ny vahaolana sy ny refried an'ny Final Fantasy ho an'ny iOS, na izany aza, tsy ny zava-drehetra no tokony hahandro indray, ary fantatry ny tovolahy ao Kobojo, studio iray ahitantsika an'i Kazushige Nojima, mpanoratra an'ny Fantasy farany, ka azontsika lazaina fa azo antoka ny fahombiazana. Mampitandrina izahay fa tsy miatrika lalao mahazatra, lavitra azy io, ambonin'ny tany rehetra noforonin'ny sy hidirantsika ao Izy, izay misy antony rehetra ny pitsopitsony ary saika tsy misy na inona na inona izay tsy noforonina miaraka amina tanjona iray, ka rehefa milalao isika dia tsy maintsy apetraka ao amin'ny efijery an'ny iPad ny fahatsapana rehetra raha tsy te-hanaikitra ny vovoka isika manoloana ireo mpifanandrina marobe izay hihaonantsika mandritra ny tantara. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny Zodiac: Orcanon Odyssey ianao? Ao amin'ny iPad News dia lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra amin'ity lalao ity.
1 Background, inona no atolotray antsika?
2 Fomba lalao
3 Sary sy feonkira
4 Ny tantara ao ambadiky ny asa be
Background, inona no atolotray antsika?
Ity no fizarana voalohany izay mampanantena ny ho saga, saga antsoina hoe Zodiac, lalao video izay tsy ho azon'ny rehetra, ary tsy miresaka momba ny vidiny izahay rehefa miteny an'io, fa tena sangan'asan'i ny JRPG ho an'ny finday tsy mbola fahita teo aloha, miaraka amin'ny mpilalao izay efa tadiavin'ny blockbuster maro ho azy ireo, avy amin'ny tanan'i Kazushige Nojima, mpanoratra ny Final Fantasy; Hitoshi Sakimoto dia avy amin'ny Kianja ihany koa ka manana traikefa amin'ny saga Final Fantasy, ankoatry ny efa tao Konami sy farany, fatra hafa amin'ny Final Fantasy, ary i Hideo Miaba, talen'ny zavakanto amin'ny Final Fantasy maro dia efa ampahany tamin'ity tetikasa mahafinaritra ity ihany koa. Raha sanatria manana fisalasalana amin'izay ho hitanao ianao rehefa milalao.
JRPG izay mikendry ny hanome ny fihetsiketsehana mifandimby hamindra kely. Miaraka amin'ny fihetsiketsehana sy ny filaharana toy ny Final Fantasy VII dia hitantsika fa misy ny fanafihana miovaova amin'ny tranga maro miaraka amina fahavalo sy namana marobe. Ireo hetsika dia hatao amin'ny alàlan'ny fanaingoana 2D mahomby, na dia hitantsika aza fa tena panorama 3D izay ahafahantsika mifandray amin'ny tranga maro. Na izany aza, nanatsoaka hevitra aho fa ny hetsika mivantana amin'ny sari-tany dia mety hahatonga antsika hiverimberina matetika.
Amin'ny fanaovana asa tanana amin'ity tranga ity dia kely dia kely izy io, na dia misy aza izy io. Na izany aza, ny fijerena ny antsipiriany no zava-dehibe kokoa, ny fanatsarana ny herin'ny fahavalo dia mety hahatonga antsika tsy hiady raha tsy haintsika ny manambatra ireo fanafihana marina amin'ny fotoana mety. Ho fanampin'izany, manana rafitra kisendrasendra izy, ka ny fanafihana ataontsika toy ny an'ny fahavalo dia mety tsy hahomby amin'ny tranga maro, manapaka tanteraka ny tetikadintsika ao anatin'ny ady. Noho io antony io, ny fivoaran'ny tarehin-tsoratra amin'ny fomba voalanjalanja dia zava-dehibe tokoa mifanaraka amin'ny filan'ny fotoana tsirairay amin'ny lalao. Tsaroanay fa nahita fitaovam-piadiana mahery 200 mahery izahay, azo hatsaraina daholo izy rehetra.
Sary sy feonkira
Tena sahy tokoa raha sahy mitsikera ny fitarihana ara-javakanto Hideo Miaba aho. Ny sarintany 2D dia mety ho lasa monotonous, na dia eo aza ny sarimiaina ny takelaka misy tantaram-peo, miaraka amina lantom-peo manga misy marika sy ny fihetsik'izy ireo mahazatra amin'ny fotoana tsy fisian'ny fikarakarana solosaina. Nomeny fikitikitihana zaza izy ireo saingy tsy isalasalana fa handresy lahatra ireo madio indrindra amin'ny lalao milalao andraikitra miaraka amina traikefa nahafinaritra ao ambadik'izany. Ireo fihetsiketsehana ireo dia mitranga mandritra ny lalao mandritra ny tantara, miaraka amin'ireo fotoana misy ny fihenjanana ateraky ny ady maro.
Ny feon-kira dia tena kilasika, miaraka amina hira milamina sy akustika ho an'ny sarimiaina sary fa tsy hisalasala hampangovitra ny sofintsika hanonta ny fihenjanana ilaina amin'ny ady, Hain'ny Hitoshi Sakimoto tsara ny fanaovana an'io ary nasehony izany isaky ny fanontana ny Final Fantasy saga, noho izany dia tsy diso anjara izy nanohy naneho izany nandritra ny saga Zodiac izay natomboka tamin'ity Orcan Odyssey ity.
Ny tantara ao ambadiky ny asa be
Tsy nisalasala ny hanome ny isa 7.3 ity lalao ity ny IGN, na dia tsy nikasa ny hiady hevitra amin'ireo manam-pahaizana momba ny lalao video aza aho, mila milaza aho fa mitady hanombana ratsy ny haben'ny efijery, ny fanjifana bateria ary ny faharetan'ny lalao video. , Ny teboka roa voalohany dia miharihary ary ny farany mety mampiahiahy, satria ny antenainao farafahakeliny 10 ora milalao satria sivy euro ny vidiny ao amin'ny iOS App Store.
Ity dia lalao filalaovana kilalao mahazatra, manome antsika ny fahafaha-manazava momba ny anjarantsika, satria amin'ny fotoana maro dia samy manana ny fahafaha-mamaly ny toe-javatra sy resaka mitranga amintsika nandritra ny tantara isika. Manomboka izany rehetra izany rehefa voatendry ho amin'ny fisafoana mahazatra azy i Cael, ilay mahery fo ary miaramila. Tamin'izany no nandikany izay mety ho iray amin'ireo lalàna lehibe indrindra amin'ny fanjakana, mikasika ny iray amin'ireo "Shards" masina. Tonga any am-ponja izahay noho ny antony tsy mazava, saingy mihena ny zava-drehetra rehefa miditra amin'ny fivalozana ireo fahavalo ratsy fanahy amin'ny fikasana hanafaka ny mpitarika azy ireo, dia amin'izay isika no miady indray. Rehefa mivoaka ny mpitarika ny fahavalo dia manomboka ny tantaraNy iraka ataontsika dia ny hanafaka ny vahoaka.
Mandritra ny tantara dia hanana namana betsaka toy ny fahavalo isika, ny zavatra tsara momba ny namana dia ny hiarahany antsika amin'ity dia sarotra ity, izay hankasitrahanay izy ireo, satria hanampy anay amin'ny ady izy ireo. Ambonin'izany rehetra izany, ilay mpiara-dia amintsika mahatoky, ilay "alika manana elatra" izay mitondra antsika amin'ny toerana iray ka hatrany amin'ny toerana hafa ary hanome ny ainy ho antsika, ny fanafihana tampoka amin'ny fomba fiantsoana mahazatra indrindra dia hampiala antsika amin'ny toe-javatra mihoatra ny iray.
Mampitandrina izahay fa JRPG tokoa io miaraka amin'ireo tarehintsoratra rehetra, tsy anjaranao izany raha miditra anaty tontolo tsy mahazatra ianao na tsy manam-potoana hanokanana amin'ny lalao video, raha tsy izany dia mety ho lava be. Raha mpankafy ny saga Fantasy Final ianao dia tsy hita ity Zodiac ity: Orcanon Odyssey dia fahotana. Azonao atao ny mahazo azy amin'ny endrika
Famerenana ny: Miguel Hernandez Gutierrez
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Zodiac: Orcanon Odyssey RPG misotro amin'ny Final Fantasy
Afaka mampakatra hira maherin'ny 25.000 ao amin'ny iTunes Match sy iCloud Library izahay izao
Mampiseho ny efitrano malalaky ny ambanin'ny tany ny horonantsary Apple Campus vaovao